SBS Language | Maxaa laga filayaa miisaaniyada caawa?
Maxaa laga filayaa miisaaniyada caawa?
Treasurer Josh Frydenberg and Minister for Finance Simon Birmingham. Source: Credit: (AAP Image/Mick Tsikas)
Qasnajiga Federalka Josh Fredenberg ayaa laga dhadhansaday in si ku meel gaar ah maciishada dadka looga caawinayo sidoo kalana uu ku jiro qorshe waqtiga dheer ah oo dhaqaalaha dalka wax looga qabanayo.
Qorshayaashan ayaa ka mid noqon doona miisaaniyada caawa oo Talaado ah la shaacinayo.
Miisaaniyada 2022/23 ayaa la filayaa inay ka muuqato in shaqo la'aantu hoos u dhacday oo gaartay 3.75% sadexda bilood ee Semtember sanadkan, taas oo noqonaysa heerkii shaqo la'aanta ee ugu hooseeyay wixii ka danbeeyay 1974.
Waxaa la saadaalinayaa in miisaaniyada ay ku jirto 250 doolar oo hal mar la siinayo shacabka Australianka ah ee daqliga yar sida kuwa cayrta qaata.
Mr Frydenberg ayaa ku sheegaya miisaaniyada qorshe dhaqaale oo waqtiga dheer bixinaysa xirfad, maalgalinaysa amniga qaran, dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha, yaraynaysa qarasha tamarta.
"Caawa miisaaniyada waxaa ka muuqan doona in kobaca dhaqaalahu kordhay, shaqo la'aantu yaraatay, mushaarooyinku kordhayaan," ayuu yiri Mr Fredenberg.
Hogamiyaha mucaaradka federalka Anthony Albanese ayaa sheegay in inkasta oo uusan Laborku ka hor imanayn lacagta halka mar ah ee la siinayo dadka daqliga yar, laakiin waqtiga lagu aaddiyay uu mid yahay mid shaki leh maadaama doorasho soo socoto.
Mr Albanese ayaa ABC u sheegay in dawladu aysan lahayn qorshe waqti dheer oo wax looga qabanayo culayska maciishada sii qaaliyoobaysa.
"Waxaan u baahan nahay waa qorshe dhaqaale, ee uma baahnin qorshe isbahaysiga markii afraad lagu dooranayo, waa siyaasad aan qorshe lahayn sidii lagu yaqaanay."